Sidee loo fahmi karaa Boos ka 'Wiilka Ilaah'? - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Waxaa laga yaabaa in qayb ka mid ah Injil uusan kicin muran aad u badan sida cinwaanka ‘Wiilka Ilaah’ kaas oo loo adeegsaday Nabiga Isa al Masih (PBUH) si ku celcelis ah Injiilka (Injiil). Ereygan Injil (Injiil) waa sababta ugu weyn ee dad badani uga shakiyaan in Injil la musuqmaasuqay. Arrinta musuqmaasuqa Injil waxaa laga baaray Qur’aanka (halkan), sunnaha (halkan), iyo dhaleecaynta qoraalka ah ee sayniska (halkan). Gunaanadku waa in Injil (Injiil) aan la musuqmaasuqin. Laakiin haddaba maxaynu ka yeelnaa ereygan ‘Wiilkii Ilaah’ ee ku jira Injil?
Mararka qaarkood kaliya maqal erey, adigoon isku dayin inaad fahamto macnaheeda, waxay u horseedi kartaa gabagabo qaldan. Tusaale ahaan, qaar badan oo reer Galbeedka ah, ayaa ka soo horjeeda ereyga ‘Jihaad’ oo aad uga muuqda warbaahinta. Waxay rumeysan yihiin in ereygan macnihiisu yahay ‘dagaalyahan waalan’, ‘dila dadka aan waxba galabsan’, ama wax la mid ah. Xaqiiqdi, kuwa waqti u qaata inay fahmaan ereyga waxay baran doonaan inay macnaheedu tahay ‘halgan’ ama ‘dadaal’ tanina waxay noqon kartaa halganka lagula jiro xoogag kala duwan, oo ay kujiraan halgan shaqsiyeed dembiga iyo jirrabaadda. Laakiin qaar badani ma oga arrintan.
Waa inaanaan ku dhicin khalad isku mid ah ereyga ‘Wiilka Ilaah’. Maqaalkan waxaan ku eegi doonnaa ereygan, fahmitaanka halka uu ka yimid, waxa loola jeedo, iyo micnaheedu maahan. Waxaan markaa ku jirnaan doonnaa meel xog ogaal ah oo looga jawaabi karo ereygan iyo Injil.
Aaway ‘Wiilka Ilaah’?
‘Wiilka Ilaahay’ waa cinwaan mana aha asalkiisa Injil (Injiil). Qorayaasha injiilka ma aysan abuurin mana bilaabin ereyga. Midkoodna Masiixiyiintu ma ay abuurin. Waan ognahay tan sababtoo ah waxaa markii ugu horreysey loo adeegsaday Sabuur, waqti dheer kahor xertii Isa al Masih (PBUH) ama Masiixiyiintu waxay noolaan jireen, qayb ahaan waxaa waxyooday nebi Daauud (Daa’uud – PBUH) qiyaastii 1000 BC. Aynu aragno halka ay markii hore ka dhacday.
Bal quruumuhu maxay u cadhoodaan,
Dadkuna maxay ugu fikiraan wax aan waxba ahayn?
2 Boqorrada dhulku col bay u taagan yihiin,
Taliyayaashuna waxay u wada tashadaan
Rabbiga iyo Masiixiisa, iyagoo leh,
3 Silsiladahooda aan gooyno
Oo xadhkahoodana aan iska fogayno.
4 Kan samada fadhiyaa wuu qosli doonaa,
Oo Sayidku iyaga wuu ku majaajiloon doonaa.
5 Markaasuu isagoo cadhaysan iyaga la hadli doonaa,
Oo wuxuu iyaga ku dhibi doonaa dhirifkiisa isagoo leh,
6 Anigu boqorkaygii waxaan fadhiisiyey
Buurtayda quduuska ah oo Siyoon.
7 Amarkii ayaan wax ka sheegi doonaa,
Rabbigu wuxuu igu yidhi, Adigu waxaad tahay wiilkayga,
Maantaan ku dhalay.
8 I bari oo waxaan dhaxal ahaan kuu siin doonaa quruumaha,
Oo dunida meelaha ugu fogfogna hanti ahaan baan kuu siin doonaa.
9 Waxaad iyaga ku jejebin doontaa ul bir ah,
Oo waxaad u burburin doontaa sida weelka dheryasameeyaha.
10 Haddaba sidaas daraaddeed, Boqorradow, caqli yeesha,
Oo xaakinnada dhulkow, edeb yeesha.
11 Rabbiga cabsi ugu adeega,
Oo reyreeya idinkoo gariiraya.
12 Wiilka dhunkada, waaba intaasoo uu idiin cadhoodaa oo aad jidka ku baabba’daane.
Waayo, cadhadiisu haddiiba way kululaan doontaa.
Waxaa barakaysan kuwa isaga isku halleeya oo dhan.
Waxaan halkan ku aragnaa wada hadal u dhexeeya ‘Rabbiga’ iyo ‘Kii uu subkay ‘. Aayadda 7aad waxaan ku aragnaa in ‘Sayidku’ (i.e. Ilaah / Allah) uu ku leeyahay Masiixa ” waxaad tahay wiilkayga, maantana waxaan aabe u noqday… ”Tan waxaa lagu soo celiyay aayadda 12aad halkaasoo naloogu dhiirrigeliyo ‘Dhunko Wiilkiisa…’. Tan iyo markii Ilaah la hadlayo oo loogu yeerayo ‘wiilkeyga’ tani waa meesha cinwaanka ‘Wiilka Ilaah’ uu ka soo jeedo. Ayaa magacan cinwaankiisu yahay ‘Wiil’? Waxay u tahay kii uu subkaday ‘. Si kale haddii loo dhigo, cinwaanka ‘Wiil’ waxaa loo adeegsadaa isweydaarsiga ‘la subkay’ marinka. Waxaan aragnay inuu Masiixu = Masiixu = Masih = Masiixa, iyo Sabuurkaani sidoo kale meesha ay cinwaanka ‘Masiixa’ asal ahaan ka timid. Marka cinwaanka ‘Wiilka Ilaah’ wuxuu ka soo jeedaa isla jumlada halkaas oo ereyga ‘Masih’ ama ‘Masiixu’ asalkiisu ka soo jeedo – qoraalladii waxyoonay ee Zabur ee la qoray 1000 sano kahor imaatinka Nebi Isa al Masih (PBUH).
Ogaanshaha tan, waxay noo oggolaaneysaa inaan fahamno dembiyada lagu soo oogay Ciise maxkamaddiisa. Hoos waxaa ku yaal sida hoggaamiyeyaasha Yuhuuddu isaga wax uga weydiiyeen xukunkiisii.
Calaamadaha Ciise: Beddelka macquulka ah ee ku saabsan ‘Wiilka Ilaah’
66 Kolkuu waagii beryay, waxaa ururay waayeelladii dadka oo ahaa wadaaddadii sare iyo culimmadiiba, oo waxay isagii geeyeen shirkoodii iyagoo leh, 67 Haddii aad Masiixa tahay, noo sheeg. Wuxuuse ku yidhi, Haddaan idiin sheego ma rumaysan doontaan. 68 Haddaan idin weyddiiyona, iima jawaabi doontaan. 69 Laakiin hadda dabadeed Wiilka Aadanahu wuxuu fadhiisan doonaa midigta xoogga Ilaah. 70 Markaasay waxay wada yidhaahdeen, Haddaba miyaad tahay Wiilka Ilaah? Wuxuu ku yidhi, Waad tidhaahdeen inaan ahay. 71 Markaasay yidhaahdeen, Maxaannu markhaati weli ugu baahan nahay? Waayo, qudheenna ayaa afkiisa ka maqalnay.
Lukoos 22: 66-71
Madaxdu waxay marka hore weydiiyeen Ciise inuu isagu yahay Masiixa (aayadda 67). Haddii aan weydiiyo qof ‘Ma X ayaa tahay’ macnaheedu waxay tahay in aan maskaxda ku haysto fikradda ‘X’. Waxaan kaliya isku dayayaa inaan ku xiro X qofka aan la hadlayo. Sidoo kale, xaqiiqda ah in hogaamiyaasha yuhuuddu ku yiraahdaan ciise miyaad tahay Masiixa? Waxay ka dhigan tahay inay maskaxda ku hayaan fikirka ‘masiixa’ Su’aashoodu waxay la xidhiidhaysay cinwaanka ‘Masiixa’ ama Masih shakhsigii Isxaaq. Laakiin markaa waxay dib ugu celiyaan su’aasha dhowr weedho ka dib ‘Ma waxaad tahay Wiilka Ilaah markaa?’ Waxay ula dhaqmayaan magacyada ‘Masiixa’ iyo ‘Wiilka Ilaah’ mid u dhigma oo isweydaarsan kara. Cinwaanadaasi waxay ahaayeen laba dhinac oo isla eg. (Isaga wuxuu ku jawaabayaa inta u dhaxaysa ‘Wiilka Aadam’. Tani waa cinwaan kale oo ka imanaya kitaabka Daanyeel oo aan halkan kula tacaali karin tan iyo markii aan diiradda saarey ‘wiilka Ilaah’). Aaway hoggaamiyeyaasha Yuhuuddu inay ka helaan fekernimada ‘Masiix’ iyo ‘Wiilka Ilaah’? Waxay ka heleen Sabuurka 2 – wax ka horeeye kun sano ka hor imaatinka Ciise. Waxay ahayd oo macquul ahaan u suurtagashay Ciise inuusan ‘Wiilkii Ilaah’ noqon haddii uusan isagu ahayn ‘Masiixa’. Tani waxay ahayd mowqifkii ay hoggaamiyeyaashii Yuhuuddu qaateen sidii aan kor ku soo aragnay.
Sidoo kale macquul bay u tahay suura galnimada Ciise / Ciise inuu noqdo ‘Masiixa iyo’ Wiilka Ilaah ‘. Waxaan ku aragnaa tan sida Butros, oo xerta u ah Ciise (PBUH) uu uga jawaabo markii la weydiiyay. Waxay ku qoran tahay Injiilka
13 Ciise goortuu dhinacyada Kaysariya Filibos yimid ayuu xertiisii weyddiiyey, oo wuxuu ku yidhi, Dadku yay ku sheegaan Wiilka Aadanaha? 14 Waxay yidhaahdeen, Qaar waxay yidhaahdaan, Yooxanaa Baabtiisaha, qaarna Eliyaas, qaar kalena waxay yidhaahdaan, Yeremyaah, ama nebiyada midkood. 15 Markaasuu wuxuu ku yidhi, Idinkuse yaad igu sheegtaan? 16 Simoon Butros ayaa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi, Waxaad tahay Masiixa ah Wiilka Ilaaha nool. 17 Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi, Waad barakaysan tahay Simoon ina Yoonis, waayo, bini-aadmi tan kuuma muujin, laakiin Aabbahayga jannada ku jira ayaa kuu muujiyey.
Matayos 16: 13-17
Butros wuxuu isku daraa cinwaanka “Masiixa” iyo ‘Wiilka Ilaah’ si dabiici ah, maxaa yeelay sidaas ayaa loo aasaasay markii labada magacba ay ka soo jeedaan Sabuurrada (Sabuur). Ciise ayaa tan u aqbalay inuu yahay waxyi ka yimid xagga Ilaah xagga Butros. Ciise waa ‘Masiixa’ sidaas darteedna wuxuu yahay ‘Wiilka Ilaah’.
Laakiin Suuragal maahan, iska-hor-imaadka xitaa, inuu Ciise noqdo ‘Masiixa’ laakiin uusan noqon ‘Wiilka Ilaah’ maxaa yeelay labada erey waxay leeyihiin isla iskumid waxayna isku macno yihiin wax isku mid ah. Taasi waxay la mid noqon doontaa odhaahda qaab gaar ah waa ‘goobaabin’ laakiin maahan ‘wareeg’. Qaabku wuxuu noqon karaa afar gees oo sidaas ma aha goobaabin ama ma noqon karto wareeg. Laakiin haddii ay tahay goobaabin markaa sidoo kale waa wareeg. Roundness waa qayb ka mid ah waxa loola jeedo goobaabin, iyo in la yiraahdo qaab gaar ah waa goobaabin laakiin wareega ma aha in la fahmo, ama in la fahmo waxa ‘goobaabin’ iyo ‘wareega’ loola jeedo. Waa isku mid ‘Masiix’ iyo ‘wiilka Ilaah’. Ciise waa labadaba ‘Masiixa’ iyo ‘Wiilka Ilaah’ (sheegashada Butros) ama isagu ma aha (aragtida hoggaamiyeyaasha Yuhuudda ee maalintaas); laakiin isagu ma noqon karo mid kale ma aha.
Waa maxay macnaha ‘Wiilka Ilaah’?
Marka waa maxay macnaha cinwaanka? Talo siin ayaa ka muuqata sida Axdiga Cusubi ku soo bandhigayo shakhsiyadda Yuusuf, mid ka mid xertii ugu horreysay (maahan kii Fircoon Yuusuf) iyo sida ay u adeegsato ‘ina…’. Waxay leedahay
36 Markaasaa Yuusuf oo rasuulladu ugu yeedhi jireen Barnabas, kan lagu micneeyey Wiilkii dhiirigelinta, oo qoladiisu Laawi ahayd oo reer Qubrus u dhashay, 37 intuu beer uu lahaa iibshay ayuu lacagtii keenay oo soo hor dhigay rasuullada.
Falimaha Rasuullada 4: 36-37
Waad arki doontaa in naaneyska ‘Barnaba’ macnaheedu yahay ‘wiilka dhiirrigelinta’. Injiilku ma wuxuu dhahayaa magaca aabihiis macnihiisu ahaa “Dhiirrigelin” waana tan sababta loogu magacaabay ‘wiilka dhiirrigelinta’? Dabcan maya! ‘Dhiirrigelintu’ waa fikrad aan la fahmi karin oo ay adag tahay in la qeexo laakiin way fududahay in la fahmo iyada oo la arko iyada oo ay ku nool yihiin qof dhiirigelin leh. Markaad eegto nolosha iyo shakhsiga Yuusuf qof ayaa ‘arki kara’ dhiirigelinta ficil ahaan oo sidaas fahmay micnaha ‘dhiirrigelinta’. Sidan ayuu Yuusuf yahay wiilka ‘dhiirrigelinta’. Wuxuu metelay ‘dhiirigelin’ qaab nololeed.
“Qofna weligiis ma arag Ilaah” (Yooxanaa 1:18). Sidaa daraadeed, way nagu adag tahay inaan run ahaantii fahamno dabeecadda iyo dabeecadda Eebbe. Waxaan u baahanahay waa inaan aragno Ilaah oo loo arko qaab nololeed, laakiin taasi macquul ma ahan maadaama ‘Ilaah yahay Ruux’ sidaa darteedna lama arki karo. Injiilku wuxuu sidaas ku soo koobaya oo sharxayaa muhiimadda nolosha iyo shakhsiyadda Ciise al Masih isagoo adeegsanaya cinwaanka ‘Ereyga Ilaah’ iyo ‘Wiilka Ilaah’
14 Ereyguna jidh buu noqday, oo waa ina dhex joogay, oo waxaannu aragnay ammaantiisii, taas oo ahayd ammaantii u ekayd tan Wiilka keliya ee Aabbaha, ee nimco iyo run ka buuxa. 15 Yooxanaa waa u marag furay isaga, wuxuuna ku qayliyey oo yidhi, Kanu waa kii aan idhi, Kan iga daba imanayaa waa iga horreeyey, waayo, hortay buu jiray. 16 Dhammaanteen waxaynu buuxnaantiisa ka helnay nimco ka nimco. 17 Waayo, sharciga waxaa loo soo dhiibay Muuse, laakiinse nimcada iyo runtu waxay ku yimaadeen Ciise Masiix. 18 Ninna ma arkin Ilaah marnaba, Wiilka keliya oo laabta Aabbaha ku jira kaasaa inoo sheegay.
Yooxanaa 1: 14,16-18
Sideen ku ogaan karnaa nimcada iyo runta Eebbe? Waxaan aragnaa inay ku nooleyd nolosha dhabta ah iyo nolosha dhiigga Ciise (PBUH). Xertii waa fahmikartay ‘nimcada iyo runta’ Eebbe markay ku arkeen Ciise. Sharciga, oo wata amarradiisa, ma uusan siin karin tusaale muuqaal ah.
Wiilku si toos ah ayuu uga yimid xagga Ilaah
Adeegsiga kale ee ‘wiilka Ilaah’ wuxuu sidoo kale naga caawinayaa inaan sifiican u fahamno micnaha ay leedahay Ciise / Ciise (PBUH). Injiilka Luukos wuxuu taxayaa abtirsiinyada (aabaha wiilkiisi) Ciise si toos ah ugu socota Aadam. Waxaan soo qaadaneynaa abtiriskooda ugu dambeyntii halka ay kahadashay
Luukos 3: 38
Waxaan halkaan ku aragnaa in Aadam loo yaqaan ‘wiilka Ilaah’. Sabab? Sababtoo ah Aadan ma uusan lahayn aabe aadane ah; wuxuu toos uga yimid xagga Ilaah. Ciisena sidoo kale ma lahayn aabbe binu aadam ah; wuxuu ku dhashay bikrad. Sida ku xusan Injiilka Yooxanaa isagu si toos ah ayuu ‘uga yimid xagga Aabbaha’.
Wiil ah tusaale ka yimid Quraanka
Qur’aanku wuxuu u adeegsaday erayga ‘ina …’ qaab lamid ah sida Injil. Tixgeli aayada soo socota
Eebaa ja abaal marin Jees jeeska, wuxuuna u siyaadiyaa xadgudubkooda iyagoon ogayn.
Suuradda al-Baqarah 2: 215
Ereyga ‘waddooyinka’ (ama ‘socotada’) waxaa macno ahaan loo qoraa ‘wiilasha wadada’ ee Carabi asalka ah (‘ibni sabil’ ama ابن السبيل). Sabab? Sababtoo ah turjubaanada iyo turjubaanada ayaa fahmay in weedhahan aysan macno ahaan u jeedineynin ‘wiilasha’ wadada, laakiin ay tahay tilmaan muujineysa socotada – kuwa si xoogan ugu xiran kuna tiirsan wadada.
Waa maxay waxa uu la micnaha ahayn wilka Ilaah
Waa isku mid Kitaabka Quduuska ah markay adeegsanayaan ereyga ‘wiilka Ilaah’. Meelkasta oo Tawreed, sabuur ama Injil kama jiro erayga ‘Wiilkii Ilaah’ wuxuu macnaheedu yahay in Ilaah galmo la yeeshay naag isla markaana uu dhalay wiil macno ahaan iyo jir ahaan ah natiijada. Fahamkan ayaa caan ku ahaa caabudaadii hore ee Griigta halkaas oo ilaahyadu leeyihiin ‘haween’. Laakiin meelna kuma aha Kitaabka Quduuska ah (al kitab) ayaa sidan lagu sheegay. Dhab ahaantii tani waa wax aan macquul aheyn maaddaama ay leedahay Ciise wuxuu ku dhashay bikrad – sidaa darteed xiriir malaha.
Waxaan halkan ku aragnay in Nebi Ishacyaah qiyaastii 750 BC uu sii sheegay in maalin maalmaha ka mid ah mustaqbalkiisa calaamad si toos ah xagga Rabbiga uga imaan doonta
14 Haddaba Rabbiga qudhiisa ayaa calaamad idin siin doona. Bal ogaada, gabadh bikrad ah baa uuraysan doonta, oo waxay dhali doontaa wiil, oo magiciisana waxay u bixin doontaa Cimmaanuu’eel.
Ishaciyaah 7: 14
Qeexitaanka wiil bikro ka dhashay ayaan lahayn bini aadam ah. Waxaan halkaan ku aragnay in Jibriil (Jibriil) ayaa Maryan cadeeyay inay tani dhici doonto maxaa yeelay ‘xoogga Ilaaha ugu sarreeya ayaa dul imaan doona (Maryan)’. Tanina kuma imaaneyso xiriir aan wanaagsaneyn oo u dhexeeya Ilaah iyo Maryan – taasi runtii waa cay. Maya, wiilkani wuxuu noqon doonaa ‘mid qoduus ah’ oo ah qaab aad u cajiib ah, oo si toos ah uga socon xagga Ilaah isagoon lahayn qorshe aadamnimo ama dadaal. Wuxuu toos uga sii socon lahaa xagga Ilaah sida ereyada toos uga socdaan. Arintan macnaheedu waa Masiixu wuxuu ahaa Wiilkii Eebbe iyo sidoo kale Ereyga Eebbe.
Tags:Ciise waa Wiilka Ilaah? Masih iyo ina Ilaahina ilaahowSu'aalaha kaleTags Masiixiyiintu Masiixiyiintu waa 'ina Ilaah'wiilka Ilaah iyo ciil